Yuhuudda Oo Masjid La Dhisay Qarnigii 13-Aad Ka Dhigtay Goob Lagu Caweeyo | allsaaxo online
Yuhuudda Oo Masjid La Dhisay Qarnigii 13-Aad Ka Dhigtay Goob Lagu Caweeyo
Maamulayaasha Yuhuudda ayaa la sheegay inay Masjid Taariikh weyn leh oo ku yaalla dhulalka la-haysto ee Falastiin ka dhigteen dhismo lagu caweeyo, sidaas waxaa sheegay Sarkaal ka tirsan Muslimiinta Deegaanka.
Shirkad Yuhuudi oo gacan-saar la leh Dowladda Hoose ee Degmadda Safadee Waqooyiga Falastiin ayaa la sheegay in Masjidka Al-axmar oo la dhisay Qarnigii 13-aad ka dhigtay Baar iyo Hool weyn oo lagu dhigo Xafladaha Arooska.Xoghayaha Hay’adda Islaamiga ee Samafalka Falastiin, Sheikh Kheyr Tabari ayaa sheegay inuu ka argagaxay markii uu arkay burburka loo geystay gudaha Masjidka qadiimiga ee Al-axmar.
Sheikh Kheyr Tabari oo la hadlay Wargeyska Al-quddus Al-carabiya ee xaruntiisa dhexe ku taallo magaalladda London ayaa sheegay inuu sannado ka hor uu gal-dacwadeed u gudbiyey Maxkamadda Nazareth ee Yuhuudda, kana codsaday in Hay’adda Kheyriga lagu soo wareejiyo Masjidka, balse aysan Maxkamadda weli xukmin go’aankaasi.Waxa kale oo uu tilmaamay in Kiiska Dacwadiisa ku lifaaqay Dukumentiyadda Lahaanshaha iyo liiska qiimaha adeegyadda ee ku baxay.Magaca Masjidka waxay Yuhuudda ku bedeleen Khaan Al-axmar, si ay u lumiyaan Sharafta Masjidka.
Masjidka waxa uu khibrad u leeyahay burburinta iyo wax-ka-bedelkiisa oo soo taxnayd tan iyo markii dhulka Yuhuudda loo abuuray sannadkii 1948-kii.
Masjidkaas waxay Yuhuuda markii hore ka dhigteen Dugsi (A Jewish School), iyadoo sannadkii 2006-dii laga dhigtay Xafiis Doorasho ee Xisbiga Kadiima ee Yuhuudda, ka hor inta aan loo isticmaalin Bakhaar lagu xareeyo dharka.
Mustafa Cabaas oo ah Taariikh-yahan iyo qof u dhashay Degmadda Safad waxa uu sheegay in Masjidka Al-axmar uu magaciisa ka kooban yahay ama lagu dul xardhay dhagxaanta casaanka ee lagu dhisay Masjiska.
Waxa uu sheegay in maanta loo isticmaalo Masjid arrimo badan, marka laga reebo inuu ahaa Masjid ay Muslimiinta ku tukadaan.
“Muslimiinta booqanaysa goobtaasi waxay weerar kala kulmaan Gumeystayaasha Yuhuudda” ayuu yiri Taariikh-yahan Mustafa Cabaas.
Waxa uu intaasi ku daray inuu Masjidku leeyahay Taariikh naadir ah iyo qiimo dhismayaasha ugu qadiimsan Caalamka.
Dhinaca kale, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee Falastiin, Yuusuf Adays waxa uu tilmaamay inay Yuhuudda xaruumo badan oo lagu cibaadaysto u rogeen gole lagu caaweeyo, kuwo ay burburiyeen iyo qaar ay ka dhigteen Kaniisado.
Masjidka Al-axmar ee ku yaalla Degmadda Safad ee Waqooyiga Falastiin waxaa asaasay MamelkuSuldaan Al-daahir Baybaris qarnigii 13-aad, iyadoo dhagaxa Astaanta ee Albaabka laga galo Masjidkaasi la dhisay sannadkii 1276 ee dhalashadii Nebi Ciise Calayhi Salaam kadib.
Si kastaba ha ahaatee, Gumeysiga Yuhuudda waxay xoog ku haystaan 2 ka mid ah Masaajidda ugu barakaysan Caalamka, iyagoo haysta Masjidka 2-aad ee ugu barakaysan Caalamka Islaamka ee Al-AQSA oo ku yaalla magaalladda barakaysan ee Quddus-ta La-haysto iyo Masjidka Al-axmar oo ay Yuhuudda ka dhigteen Gole ay dadkaasi shayaadiinta ah ku caweeyaan.